Renegade Animation သည်မူလအစီအစဉ်ကိုတိုးချဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Brittney Jorgensen ကိုထိတွေ့မှု | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့မူရင်း Programming တိုးချဲ့; Brittney Jorgensen ဌာနမှူးဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှပုတ်
ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့မူရင်း Programming တိုးချဲ့; Brittney Jorgensen ဌာနမှူးဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှပုတ်
Animation ရဲ့စတူဒီယိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတပိုက်လိုင်းအတွက် 12 စီးရီးရှိပါတယ်.
လင်းဒေးလ်က၎င်း၏မူရင်း programming ကိုယူနစ်, ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့စျေးကွက်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ဦးခေါင်း၏အသစ်စက်စက်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ post မှ Brittney Jorgensen ရာထူးတိုးထားပြီးကြီးထွားဖို့ Calif. -ဆက်လက်။ Jorgensen ကာတွန်းရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးများနှင့်အင်္ဂါရပ်များအဘို့သဘောတရားများကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ဖန်တီးသူ, စာရေးဆရာများနှင့်တိရစ္ဆာန်နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း, စတူဒီယို, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် streaming များန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူစတူဒီယိုရဲ့အကြီးအကဲဆက်ဆံရေးရုံးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလွတ်လပ်သောကာတွန်းရုပ်ရှင်စတူဒီယိုလက်ရှိ 12 ဆယ်ကျော်သက်မှတဆင့် Pre-ကြောငျးမှအသက်အပိုင်းအခြားပစ်မှတ်ထား, ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စီးရီးကာတွန်းကားခဲ့သညျ။
အရည်အသွေးအဝယ်လိုအား, ကာတွန်းအကြောင်းအရာဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ Darrell ဗန် Citters သည်နှင့်အညီ, ခိုင်မာတယ်။ "ကျနော်တို့ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုက်လိုင်းအတွက်စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်. အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ "ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်တိုးတက်မှုနှင့် streaming များထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူယခုမူရင်းပရိုဂရမ်းမင်းအပေါ်အာရုံစိုကျဖို့လက်ျာအချိန်ဖြစ်၏။ "
"Brittany ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအားထုတ်မှုကိုဦးဆောငျရနျစုံလင်သောရွေးချယ်မှုပါပဲ" ဟုအလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအက်ရှလေ Postlewaite ကထပ်ပြောသည်။ "သူမဟာကာတွန်းတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့နောက်ခံရှိပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကထပ်ပြောသည်။ "
ထုတ်လုပ်မှုဘက်မှာ 2012 အတွက်ဖောက်ပြန်သောသူငယ်ပူးပေါင်းသူကို Jorgensen, ထို့အပြင်မကြာသေးမီကအပေါ်ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် ကိုယ်အားဖြင့်ဖြစ်ခြင်းကင်ဆာနှင့်အတူကလေးများဆေးရုံတင်ကုသရန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကိုကူညီထုတ်လုပ်ထားတဲ့စိတ်ကူးယဉ်မိတျဆှေလူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်တစ်ဦးကာတွန်းတိုတောင်း။ ယခင်ကသူမ Bento ဖွစျပါတယျ Box ကိုဖျော်ဖြေမှုမှာထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမလည်းဒစ္စနေး Animation ရဲ့အပေါ်မှာထုတ်လုပ်မှုအခန်းကဏ္ဍများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် Tron: လူထုအုံကြွမှု။
ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့အတွင်းထိပ်တန်းကာတွန်းစာရေးဆရာများနှင့်အနုပညာရှင်များနှင့်အတူသက်တမ်းကြာဆက်ဆံရေးရှိပါတယ် ဟောလိဝုဒ်နှင့် In-အိမ်သူအိမ်သားပို့ဆောင်မှုမှတဆင့်အယူအဆကနေပြပွဲယူဖို့အရင်းမြစ်များရှိခြင်းအတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကအရမ်းအစမှပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ကိုချစ်" ဟုသူမကပြောပါတယ်။ "Talent, ဇာတ်ညွှန်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ကွက်ကိုလာတစ်ပြပွဲသမ်မာကမျြး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုစိတ်ကူးရုံပိုးများကူးစက်စေနိုင်သည်။ ကျနော်တို့သူတို့သည်ငါတို့စတိုင်နှင့်မထိုက်မတန်ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားမှညီနိုင်အောင်စိတ်ကူးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖန်တီးသူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ "
ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့အများအပြားကာတွန်းရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးအပါအဝင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ဟိုင်းမင်္ဂလာပါ Puffy AmiYumi, အဆိုပါမစ္စတာအမျိုးသားများအတွက် Show ကိုဗိုလ်ကြီးကြံ့ခိုင် နှင့် တွမ် & Jerry, ကာတွန်းကွန်ယက်အတွက်အားလုံး, နှင့် PBS / WNET ရှိုးနှစ်ခုသူဟာ Emmy Award ဆုလျာထားခံရရှိပါတယ်, Oh, နောဧ! အဆိုပါစတူဒီယို၏မူလဝဘ်စီးရီး Elmo Aardvark: အာကာသဟင်းလင်းပြင်စုံထောက် တစ်ဦးအီလက်ထရောနစ်အလတ်စားအတွက်အကောင်းဆုံးကာတွန်းစီးရီးတစ်ခု Annie ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏ပြဇာတ်လက်ရာကတော့ကာတွန်းကားအားလပ်ရက်အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည် ခရစ္စမတ်တဖန်ဤတွင်ဖြစ်ပါသည်မကြာသေးမီကစင်မြင့်တစ်ခုဂီတသို့အဆင်ပြေအောင်ခဲ့သော။
ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့ 111 အီးဘရော့ဒ်ဝေး, Ste မှာတည်ရှိပါတယ်။ 208, လင်းဒေးလ်လီဖိုးနီးယား 91205 ။ 818.551.2351 သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခရီး Call www.renegadeanimation.com
ကာတွန်း ပြောင်းရွှေ့အပေါ်လူတွေ လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ 2017-10-31
ယခင်: TVT မီဒီယာသုတေသနအီးယူနှင့်တူရကီဖြတ်ပြီး 61 ဘာသာစကားများနှင့်အတူဥရောပထုတ်လွှင့်ဘာသာစကားများကြီးမားမတူကွဲပြားမှုကိုပြသ
နောက်တစ်ခု: ရော့ Wentz ကွင်းဆင်း Tech မှစစ်ဆင်ရေးများကိုစီမံကွပ်ကဲရန် ASG ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်